घरको गृह कर्जा - कसरी छनौट गर्ने?
एक आधुनिक घर गृह एयर कंडीशनर उन मान्छे को लागि एक उत्कृष्ट तरीका हो जुन अपार्टमेंट को सबै कोठाहरुमा शक्तिशाली स्थिर वातावरण उपकरण स्थापित नहीं गर्न सक्छन्। यस प्रकारको गुणस्तर उपकरणहरू मानिसहरूका लागि राम्रो सहयोगीहरू छन्, हावा ठंडा गर्नका लागि, तिनीहरू जीवित चौथाईहरूलाई ताप, हानिकारक र नाच गर्न सक्षम छन्।
फर्श एयर कंडीशनिंग को प्रकार
पुरानो मोडेल को हावा कंडीशनर को विकल्प एक लामो समय को लागि खोज रहेको छ। धेरै अवस्थामा, अपार्टमेन्ट मालिकहरू धेरै एकाइहरूको शक्तिशाली बहु-विभाजित प्रणालीको माध्यमभन्दा बाहिर छन्, जसको लागि यो प्रोपोलिनस्टिस्टहरू आकर्षित गर्न आवश्यक छ। कहिलेकाहीं बाह्य मा बाह्य मोड्युलहरू माउन्ट गर्न सकिँदैन, किनभने बहुविध-मंजिलो भवनको उपस्थिति परिवर्तन गर्न निषेधित। मोबाइल फ्लो-प्रकार एयर कंडीशनरहरू खरिद गर्ने अर्को कारणले तालिम दिन्छ जुन गर्मीको मौसममा देशको कोटहरूमा आराममा आराम गर्ने इच्छा हो।
घरको लागि फ्लो एअर कंडीशनरको परिवार सानो छ, तर यसको आफ्नै नेताहरू र बहिनीहरूसँग विशिष्ट मतभेदमा टेक्नोलोजी विशेषताहरू छन्। शीतलन उपकरण चयन गरिएको कोठाको आयाममा आधारित छ, र यो प्यारामिटरले प्रत्यक्ष रूपमा यन्त्रको शक्तिलाई प्रभाव पार्छ, यसको अतिरिक्त, कोठामा ढोका र खिडकियोंको उपस्थिति, उनीहरूको संख्या र प्रयोगको आवृत्तिमा ध्यान दिइन्छ।
घरको लागि फर्श एयर कंडीशनिंगको लाभ:
आउटडोर एयर कंडीशनर को लागि घर को कम ऊर्जा को उपयोग गर्दछ,
यन्त्रको स्टाइलिश डिजाइन आधुनिक आन्तरिक मा सानो छ,
यन्त्रहरू अपार्टमेटको वरिपरि सारिन्छन् र देशमा कारहरूमा जान सकिन्छ,
यन्त्रको स्थापनाले विशेष अनुमतिहरू र विशेषज्ञको संलग्नता आवश्यक पर्दैन,
मोडेलको एक विस्तृत चयनले घरको लागि फ्लोर एअर कंडीशनरको विभिन्न प्रकारको फिक्सिंग को अनुमति दिन्छ।
फर्श एयर कंडीशनिंग को नुकसान:
निक्कै एक सीमित लम्बाइ छ र अपरेशनको दौरान हट्छ,
आउटडोर एयर कंडीशनर को लागि घर - शोर डिवाइस (50 डीबी सम्म)
परिणामी कन्डेनेट को समय देखि ट्रे देखि हटाई जानी चाहिए,
आपूर्ति पाइपलाइनको कमीले आसन्न कोठाबाट ताप इनपुटको कारण अपरेशनको क्षमतालाई कम गर्छ।
तल र छत कंडीशनर
जब कोठाहरू मानक विधिहरू प्रयोग गरेर पर्खालहरूमा ठंडा प्रणाली इकाइहरू माउन्ट गर्ने क्षमता छैन, त्यसकारण यसले इन्धनको लागि विश्वव्यापी प्रकार एयर कंडीशनरहरू भित्तामा खरिद गर्दछ। भित्री मोड्युल आफैलाई संलग्न गरेर, हामी माथिको चिसो हावा प्रवाह प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिलाई मस्यौदाको नकारात्मक प्रभाव घटाउन सक्षम छौं। जब छत माईन्छ, ठंडे जनता छतमा समानांतर चल्छ। यो उपकरण निचो मा मामला को आधा मोटाई सम्म दफन गर्न सकिन्छ।
घरको लागि फर्श-छत एयर कंडीशनिंग प्रयोग गर्ने विशेषताहरू:
तपाईं नली र केबल्स मुखौटा गर्न तरिकाहरू विचार गर्न आवश्यक छ,
एक शक्तिशाली अलग केबल देखि शक्ति को आवश्यकता छ,
सबै जोडहरू कसलाई सील गरिन्छ,
एयर कंडीशनरहरूसँग धेरै आउटलेटहरू पर्खाल वा छतको मध्य भागमा निश्चित छन्।
मोबाइल फर्श हावा कंडीशनर
मोबाइल फर्श एयर कंडीशनरहरूको आकारले विशाल समापनहरू जस्तो नमिल्ने, जुन आन्तरिक मा धेरै प्रमुख छन्। फ्लोर छत प्रणालीको विपरीत, यहाँ सबै नोडहरू एकल हलुका भित्र छन्, र हावा जनसञ्झ्यालले लचीला नलीद्वारा सञ्झ्यालमा पट्टिन्छन्। यो सम्भव छ, सुविधाको लागि, एयर ह्यासहरू वेंटिलेशन छेदहरूमा जडान गर्न वा सञ्झ्यालमा विशेष एडेप्टरहरू प्रयोग गर्न।
घरको लागि फर्श एयर कंडीशनिंगको क्षति:
प्रशंसकहरूको शोरको कामले तपाईंलाई रातमा विश्रामबाट रोक्छ,
बजेट मोडेल मा कन्डेनेट को कुनै स्वचालित जल निकासी छैन,
घरको लागि फ्लोर एअर कंडीशनर अलग-अलग इकाइहरु संग एक स्थिर विभाजित शीतलन प्रणालीमा सधैँ कम हुन्छ।
बाहिरी मिनी एअर कंडीशनिंग
सानो घर फ्लोर एयर कंडीशनर अन्तर्गत प्रायः एयर वायु नगर्ने मोबाइल उपकरणहरू हो। ठुलो तिनीहरू नम नलीको फिल्टरको माध्यमबाट हावा उड्दैछन्, यसले गर्दा तरल अणुहरू भापमा परिणत हुन सक्छ। उपकरणको डिजाइन र स्यालोपनको सादगी खरिदहरूलाई आकर्षित गर्दछ, तर यो उपकरणमा महत्त्वपूर्ण कमी छ। धेरै सस्तो उपकरणहरू प्रभावकारी छैनन्, तिनीहरू काममा तापनिन्छन् र मात्र एक humidifier को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एयर कंडीशनरको फाइदा बिना वायु निकास
कुनै संवेदनशीलता छैन,
कम बिजुली खपत।
एयर कंडीशनिंग को नुकसान बिना वायु नर्त को बिना:
तापमान कमी नगण्य वा विशेष रूप देखि बहिर्गमन वायु प्रवाह को कार्य क्षेत्र मा,
यो सधैँ evaporator मा तरल डाल्न आवश्यक छ।
फर्श एयर कंडीशनर कसरी छनौट गर्ने?
मोबाइल स्प्लिट प्रणालीहरू स्थापना गर्न थप र अधिक गाह्रो छ, तर तिनीहरू चुपचाप चुप ठूलो कोठाको सेवा गर्न सक्षम छन्। यदि तपाईं सान्त्वना मनपराउनुहुन्छ र महँगो खरिदका लागि पैसा पाउनुहुन्छ भने एक स्थिर आउटडोर एयर कंडीशनर सबैभन्दा इष्टतम विकल्प हुनेछ। मोबाइल मोनब्याकहरू स्थापना गर्न सजिलो छ, ती सस्ता, हल्का, आकारमा सानो, सजिलो र यातायात गर्न सजिलो हुन्छ। यो तिनीहरूलाई ड्याचमा, भाडामा परिसरमा स्थापना गर्न फायदेमंद छ, जसमा स्थानहरु जहाँ यूनिटको अपरेसनबाट आवाज असुविधाको कारण हुनेछैन।
फ्लोर एयर कंडीशनरको अपरेसन
सबै हावा कंडीशनर र मोबाइल प्रणाली, एयर वायु बिना मोडेल को अपवाद संग एक एकल योजना अनुसार काम गर्दछ। कोठाबाट एयर चिसो छ र कूलिंग इकाईमा प्रवेश गर्दछ जहाँ फ्रिजको वाष्पीकरण हुन्छ, जुन वातावरणबाट गर्मी लाग्छ। यसबाहेक, ठुलो हावा कोठामा लुकेको छ। खर्च गरिएको ठुलो कन्डेनसरमा प्रवेश गर्दछ र तरल राज्यमा जान्छ। यहाँ उहाँले एक पाइप प्रणाली को माध्यम ले हवा मा अवशोषित गर्मी को ऊर्जा प्रदान गर्दछ, जो कंडेनसर धोने छ। नालीदार नली को माध्यम ले हावा हावा को रिहाई को वायुमंडल मा फैलिएको छ।
बाहिरी एयर कंडीशनिंग - शक्ति
लगभग 10 एम2ठाउँ को उपकरण को 1 कि.वा.ब्लूडब्ल्यू सम्म आवश्यक हुन्छ। यस नियमको अनुसार, कुनै पनि शीतलन प्रणाली चयन नगरेसम्म टाइप फर्श एयर कंडीशनरहरू बिना हावा नल, फ्लोर उपकरणहरू वायु निकास, फ्लोर र छत उपकरणहरू बिना। यो थप्न यो राम्रो छ कि यी यन्त्रहरू मार्जिनमा खरिद गर्न, तिनीहरूको गणना दक्षता सधै सञ्झ्यालको सीमानाको कारणले केहि कम हुन्छ। अधिकांश मोबाइल एयर कंडीशनरहरू 3.5 केजीवाट क्षमताको साथमा प्रभावकारी ढंगले कोठाहरूमा 35-40 मिटरसम्म काम गर्दछ, गर्मीमा कार्यहरू प्रदर्शन गर्छन्।
फ्लोर-स्ट्यान्ड एअर कंडीशनर मूल्याङ्कन
गुणस्तर कूलिंग उपकरण अब छनौट गर्न गाह्रो छ। इन्टरनेट र प्रेस विज्ञापन सस्ता उपकरणहरू राम्ररी विशेष गुणहरू संग छानिएको छ, तर वास्तवमा तिनीहरूले मालिक हानि र निराशा ल्याउँछन्। यस मुद्दाको समाधान गर्न, तपाईंले समय-समयमा प्रख्यात निर्माताहरूको फर्श एयर कंडीशनरहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई लागत, क्षमता, सकारात्मक प्रतिक्रिया संख्या र अन्य महत्त्वपूर्ण डेटाको तुलना गर्नुहोस्। उपकरणहरू बलू, इलेक्ट्रोक्स, टिमबर्क, वेको, एईजी, हुन्डई, व्र्वरपूल, बिसीक, सामान्य जलवायु, ज्युसिसी धेरै लोकप्रिय छन्।
आउटडोर एयर कंडीशनिंग Ballu
अक्सर सर्वोत्तम सस्ता उपकरणहरूको मूल्याङ्कनमा, ग्लोबल-प्रकार एयर कंडीशनरहरू बलू BPAM-09H अपार्टमेन्ट र Ballu BPAC-07 सीएमका लागि उच्च ऊर्जा खपत वर्ग "ए" जित्छन्। अपेक्षाकृत लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको साथ, यी कंडीशनरहरू प्रतिस्पर्धाहरूको लागि धेरै कम छैन। SMART परिवार को लागि उपकरण एक विशेष टैंक मा अपशिष्ट तरल आउटलेट संग सुसज्जित छ, घर देखि लीक देखि रक्षा। अन्य महत्वपूर्ण सकारात्मक नवाचारहरू चार-गति प्रशंसकको उपस्थिति हुन् र विभिन्न दिशाहरूमा हवा प्रवाहको दिशा स्वचालित रूपमा स्वचालित रूपमा समायोजन गर्ने क्षमता।
इलेक्ट्रोलक्स आउटडोर वातानुकूलन
इलेक्ट्रोलक्स मोडेलहरू उनीहरूको राम्रा गुणका लागि चिनिन्छन्, जुन एकैसाथ ठुलो, सफा गर्न सकिन्छ, कोठामा हावा आउन सक्छ। यदि तपाइँ एक अपार्टमेन्टको लागि गुणस्तर मोबाइल एअर कंडीशनर खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूमध्ये तपाईंले खरीदको लागि धेरै राम्रो उम्मेदवारहरू पाउन सक्नुहुन्छ। मोडेल इलेक्ट्रोलक्स EACM-12 एजी स्वत: कन्डेन्सट हटाउने, टाइमर, सटीक र विश्वसनीय स्वचालन संग सुसज्जित छ। वायु गेट निस्पंदन प्रणालीले धूलको सानो कणहरू पत्ता लगाएको छ, एपिफाइटिसको प्रजनन रोक्छ, सिगरेट धुवाँ र माछाको गंध।
फर्श एयर कंडीशनर Beko
उपलब्ध मूल्यहरू ब्रान्ड Veco को परिसर ठंडा गर्नका लागि उपकरणहरूका लागि फरक छन्, तिनीहरू सधैं मोबाइल एयर कंडीशनरहरूको समीक्षाहरूमा उपस्थित छन् जसका फर्महरुका मानिसहरू लोकप्रिय छ। स्टाइलिश डिजाइन र राम्रो विधान फरक फरक मोडेलहरू BEKO BLKNE-09C, BEKO BNP-09C, BEKO BLKNE-12C। मूल्यमा सानो भिन्नता, समग्र आयामहरू र शक्तिले यसलाई तपाईंको घरको लागि उत्तम स्थापनालाई सजिलो बनाउँछ। ती सबैसँग इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण, टाइमर र गुणस्तर फिल्टर छन्। यी एयर कंडीशनरहरूको एक महत्वपूर्ण हानि प्रशंसकहरूको शोर अपरेशन हो, जसले यसलाई लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सक्दछ।
फर्श एयर कंडीशनिंग व्हर्लपूल
फर्म कंडीशनरहरूको हाम्रो मूल्याङ्कन फर्म व्हिर्लपूलको उत्कृष्ट प्रविधि बिना, जुन सधैँ घरको लागि उत्तम उपन्यासहरूसँग सुसज्जित छ। यो ब्रान्डको मोबाइल यन्त्रहरूले ताप, भित्ता र कोठाको सुखाने उत्पादनलाई ठूल गर्न थप गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि, व्हार्लपामम 092 एयर कंडीशनरसँग रातो मोड, स्वत: पुन: सुरुवात प्रकार्य र स्वत: चयन मोड छ।2किलोवाटको बिजुलीको साथ, यसले गर्मीमा गर्मीको प्रबन्ध गर्दछ 25 m2को क्षेत्रमा, आराम र कामको लागि आरामदायक परिस्थिति सिर्जना गर्दछ।
धेरै व्यक्ति फर्श यन्त्रहरूमा एकत्रित कन्डेनसनको बारेमा उजुरी गर्छन्, जुन आवधिक रूपमा फूसबाट हटाउनु पर्छ। मोबाइल एयर कंडीशनरको दर्जामा हेर्दै, यो राम्रो उपकरण उपकरणको लागि छनौट गर्न राम्रो छ जुन प्रभावकारी नमी हटाउने प्रणाली हो। यो प्रकार्यमा उपकरण AEG ACM-12HR को 3.5 कि.जी.ब्लूडब्ल्यू शक्ति हो, जसको लागि 35 एम2कोठाको कोठाको लागि डिजाइन गरियो। यो प्रभावकारी रूपमा ठुलो, सुखाने र हीटिंग मोडमा काम गर्छ। एक विशेष "टर्बो पावर" मोड छ, फ्यान रोटेशन को गति बढाने को लागि, कोठा मा चाँडै को तापमान कम गर्न को लागि।
कटलरीको लागि तालिका खडा
परिचित चीजहरूमा नयाँ रूप
फ्रिजको साथ पानी कूलर
ग्रील्ड फ्राइङ प्यान
3 डी टिभी कसरी छनौट गर्ने?
ग्यास कुकरको लागि दबाब कुकुर
कुञ्जी रोशनीको साथ किबोर्ड
मैनीक्योरको लागि वैक्यूम क्लीनर
सञ्झ्यालमा बिरुवाहरू हाइलाइट गर्नका लागि लैंप
टम जोन्स र प्रिस्किल्ला प्रेस्ली एक मितिमा गए
फ्रिज कसरी छनौट गर्ने?
KTG गर्भावस्थाको समयमा - ट्रान्सक्रिप्ट
नैतिक हानि - नैतिक हानिको लागि आधार र क्षतिपूर्ति रकम
ओवनमा आलु संग बतख नुस्खा
सूप किम्ची - नुस्खा
किन युद्धहरू हातमा देखा पर्छन्?
अमेरिकामा राष्ट्रपतिको दौड डन जॉनसनमा सामेल हुन पर्ने योजना छ
वसन्तमा पछाडि प्रुन
1 वर्षमा बच्चालाई कसरी पोषण गर्न सिकाउनुहुन्छ?
टी शर्ट "डन टाढा छैन"
चकलेट केला केक
ओवनमा सब्जिहरु संग बतख
महिलाको बैले जूता 2016
भान्सामा पलिएको पाइप